ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြစို့ – အောင်ဒင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြစို့ – အောင်ဒင်
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ကြစို့ – အောင်ဒင်
Posted by kai on Jul 9, 2011 in Critic, Politics, Issues |7comments
ဖတ်ကြည့်ဖို့ ဖြန့်ပေးလိုက်တာပါ..။pdf ဖြစ်တာမို့ .. ဒေါင်းပြီးဖတ်ကြဖို့ပါပဲ…။
ကိုခင်ဝမ်းရဲ့“မဟာသဘာဝရှင်”၊ကိုထူးအိမ်သင်ရဲ့ “ရာဇ၀င်များရဲ့သတို့သမီး” ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ မိခင်ဧရာဝတီဟာ မချစ်မနှစ်သက်သောသူများရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို စတင်ခံစားနေရပါပြီ၊ ဧရာဝတီကိုအချိန်မှီကယ်တင်နိုင်ကြဖို့ အင်နဲ့အားနဲ့ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ကြဖို့ ဒီစာတမ်းကိုေ၇းပါတယ်….. တဲ့..။
Save The Irrawaddy,July 8, 2011 << Download pdf
တရုတ်ကဖိ ရှမ်းကအိ၊ ရှိသည်ဗမာ အနောက်မှာတဲ့ တဘောင်ရှိသားပဲ။
ကဲ….မြန်မာအပေါင်းတို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်တွေကို ပြေးကြပေတော့……
ဂက်စ်တူးထုတ်တာက..ငလျင်နဲ့ အဆက်အစပ်ရှိပုံရတယ်လို့.. ဒီနေ့ပဲသတင်းတက်လာပါတယ်..။
အဲဒါလေးကိုပါ.. မြန်မာ့အရေးမှာ တွဲဖတ်နိုင်ကြဖို့ပါ…။
NPR’s All Things Considered Looks At Arkansas Fracking
8 hours 31 minutes ago By Ron Breeding
National Public Radio’s signature news magazine All Things Considered devoted 13 minutes Friday afternoon to an examination ofastory we in Arkansas have been following for months: the possible link between natural gas drilling activity and an uptick in earthquake activity.
Here’s NPR’s introduction to the story:
Lately, Faulkner County, Ark., has hadawhole lotta shakin’ going on. Some of it is from the cash infusion brought on by the influx of natural gas fracking, with more than 3,000 new wells drilled in the area since the middle of the last decade. A mysterious swarm of thousands of small earthquakes has also rattled the towns of Guy and Greenbrier since late last year.
Producers Dan Collison and Elizabeth Meister traveled to Arkansas to talk to people about what’s going on under their feet. They shared the community’s voices with musician Will Oldham, a.k.a. Bonnie “Prince” Billy, who contributed an original song, “Mother Nature Kneels,” based on their stories.
The Natural State is the latest installment in Long Haul Productions’ Song+Stories series, and was produced with partial support from KCRW’s Independent Producers Fund.
တရုတ်ကိုအားကိုးနေတာကြာပါပီ။မ.ဆ.လ ခေတ်မှ ယနေ့ထိတိုင်အောင်ပါပဲ။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကို ဦးနှောက်ရှိပြီး အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ဦးမဆောင်နိုင်သ၍ကတော့ နောင်လဲဒီအတိုင်းပဲ တရုတ်ရဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်ကျွန်ပြုတာကိုခံနေရအုံးမှာပါပဲ။
ထိုးကြွေးလိုက်တယ် ( လုပ်ရက်တယ် )
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သွေးတွေနဲ့ စီးဆင်းနေတှဲ့ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ရန်အတွက် .အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဧရာဝတီဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အသက်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ပုံရိပ်ဆိုတာပါပဲ ။
ပြည်ပအားကိုး မရေရိုး အကျိုးပြင်ဝါဒီများအား ဆန့်ကျင်ကြ
ဒီလိုမြစ်ကြီးမျိုးက နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတာမဟုတ်ဘူး